Dilka Hani Xasan, Hargeysaay Yaa Loo Haystaa? | Somaliland.Org
Dilka Hani Xasan, Hargeysaay Yaa Loo Haystaa?
April 29, 2008	“Hargeysa (Somaliland.Org) Ciidamada Booliska magaaldda Hargeysa oo ay weheliyaan ciidamada qalabka sida ayaa xalay habeenimadii toogasho ku dilay gabadh dhalinyaro ah oo magaceeda la yidhaahdo Hani Xasan Jaamac oo la socotay gaadhi”: http://arc.somaliland.org/2008/04/27/ciidamada-booliska-oo-xalay-toogasho-ku-dilay-gabadh-dhalinyaro-ah/
Faalladeena warku waxay ku saabsantahay dhacdadaas murugada badan: Aad iyo aad ayaanu uga xunnahay dilkani bahalnimada iyo fuleynimada iyo jaahilnimada intaba isku biirsaday ee ciidamada dawlada Somaliland ugu geysteen haweenayda da’ada yar, HANI XASAN JAAMAC (AUN). Waxan ku tilmaanno dhacdadan oo kale ma garanayno oo an ahayn sidii aynu hore ugu sheegnay inay dawladda iyo xisbiga dalku yihiin “dhagar qabayaal an is ogayn, wakhtigoodiina dhammaaday” Aabaha inantaasi dhalay, ee Xasan ahna odayada Hargeysa ayaa waxay wararku sheegayaan inuu kaliya ku qanci karo in ciddii inantiisa dishay la hor keeno sharciga. Waa inanta kaliya ee odaygaasi dhalay waxayna ahayd 20 jir bilic iyo mustaqbal fiicana lahayd. Waxay ka timiday farxad aroos waxayna ku faanaysay oo hadhsanaysay xorriyada iyo nabad galyada dalkeeda ka jirtay intii ka horreysay habeenkaasi madoow ee heddeeda la gooyay. Hase yeeshee, “Burkaba bahal hoose kamayna filaynin’. Kuwa dilay iyo ka amarka siiyay iyo ka soo hubeeyayba intuba waa wada BAHALO.
Hadaba su’aasha xusidda mudani waxay tahay, Reer Hargeysoow; ayaa loo haystaa dilkaasi bahalnimo ee loo geystay Hani Xasan?. Haddii aynu su’aashaas sii sarrifno ama sii jilcinana, waxay noqonaysaa sidan:
Ma waxa loo haystaa, kii xabbada riday?
Ma waxa loo haystaa, kii amarka bixiyay?
Ma waxa loo haystaa, kii ciidanka meesha Keenay?
Ma waxa loo haystaa, dirawalkii waday baabuurka Hani la socotay?
Ma waxa loo haystaa, arooskay tegtay inantu?
Ma waxa loo haystaa reer Hargeysa oo ammaankooda xumeeyay?
Ma waxa loo haystaa kuwii amniga iyo maamulka dalka lagu aaminay oo bahaloobay?
Su’aaluhu way badan yihiin oo intaas kuma wada koobna, jawaabo badana way leeyihiin ama yeelan karaan. Balse, soomaalidu, waxay ku maah-maahdaa, “biyo meel godanbay iskugu soo ururaan iyo , madax meel ka sarreysa oo la taabto ma jirto”. Sidaa daraadeed masuuliyadda dilkaas bahalnimo waxa iska leh xukummada ku meel gaadhka ah ee dalka Somaliland. Dawladaas ku meel gaadhka ee wakhtigeedii dhacay, iyo madaxweynahooda ku meel gaadhka ah, iyo xisbigooda ku meel gaadhka ah, ayaana ka masuul ah dilkaas makasnimo ee HANI XASAN JAAMAC. Sidoo kalana, iyagaa ka masuul ah dilalkii kale iyo rabshadihii dhawaan ka dhacay Hargeysa, kuwaas oo ka dhashay kadib markay ummadda dhex dhigeen qoqobyo iyo qaybi oo xukun. Hadal iyo dhammaantii, dilalka bahalnimo ee Hargeysa ka dhaca, waxa ka masuula xukummadda ku meel gaadhka ah ee Somaliland, iyagana hallagala xisaabtamo.